शीर्ष २ Ro रोमान्स एनिमे नेटफ्लिक्समा हेर्नका लागि [क्लिपहरू सहित] - पालना दृश्य
by Dima XNUM X अक्टोबर 22 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड शीर्ष २ 25 रोमान्स एनिमेस नेटफ्लिक्समा हेर्नका लागि [क्लिपहरू सहित]
नेटफ्लिक्स एक ठूलो प्लेटफर्म हो जहाँ प्रति हप्ता धेरै शीर्षकहरू थपिन्छन्। प्रत्येक वर्ष Netflix मा थपिने धेरै शीर्षकहरू मध्ये, तिनीहरूमध्ये धेरै सानो संख्या एनिमे रोमान्स विधामा छन्। Netflix एक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म पनि हो जुन धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्, USA खण्डमा 5,000 भन्दा बढी शीर्षकहरू संग त्यहाँ एक रोमान्टिक एनिमे श्रृंखला वा चलचित्र हो जुन तपाइँको स्वाद फिट हुनेछ। यस लेखमा, हामी Netflix मा हेर्नको लागि 50 रोमान्स एनिमे भन्दा बढी जाँदैछौं। यस लेखमा कुनै पनि बिगार्नकर्ताहरू छैनन् र ती मुख्य छैनन्।
२.. सागरका छालहरू (चलचित्र १ घण्टा १२ मिटर)
ओशन वेभ्सले ताकु नामको कलेज विद्यार्थीको कथालाई पछ्याउँछ किनकि उसले दुई वर्ष अघि विद्यार्थीहरूको स्थानान्तरण गरेको र उसको साथी युकातासँगको आफ्नो सम्बन्धको जाँच गरेको ग्रीष्मकालीन समय सम्झन्छ। त्यहाँ हाल एक युरोपेली स्पेनिश, फ्रान्सेली, इटालियन, र मन्डारिन डब साथै जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ हिन्दी, पोलिश, अंग्रेजी र जापानी [CC] उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१०. कुनै खेल छैन जीवन (१ सत्र, १२ एपिसोड)
जादू हाईस्कूलमा अनियमित
पौराणिक गेमर दाजुभाइ सोरा र शिरोलाई संसारमा सारिएको छ जहाँ जीवन खेलहरूको श्रृंखला हो र मानवता लोप हुने गम्भीर खतरामा छ। के तिनीहरू आफ्नो भिन्नताहरू हटाउन र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यहाँ हाल स्पेनिश, अंग्रेजी, ब्राजिलियन पोर्चुगिज र जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ अंग्रेजी, स्पेनिश र ब्राजिलियन पोर्चुगिज पनि छन्।
२.. जादू हाईस्कूलमा अनियमित (१ सत्र २ 23 एपिसोड)
म्याजिक हाईस्कूलमा अनियमितले तातुयाको कथालाई पछ्याउँछ जसले स्कूल प्रतियोगितामा भाग लिँदा, शंकाको सामना गर्छ, र आफूलाई इन्जिनियरिङ स्क्वाडको योग्य साबित गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्छिन्। यस शृङ्खलाका लागि हाल कुनै डबहरू छैनन्, यद्यपि, त्यहाँ अंग्रेजी, स्पेनिस, ब्राजिलियन पोर्चुगिज, र जापानी उपशीर्षकहरू छन्।
२२. विश्वको यो कुनामा (२ घण्टा m मिटर)
सुजुले हिरोशिमा बाहिर बस्ने परिवारसँग विवाह गरिसकेपछि र दोस्रो विश्वयुद्धले उनको बाँच्ने क्षमतालाई चुनौती नदिएसम्म चाँडै आफ्नो नयाँ जीवनमा बस्छिन्। यो कम्तिमा भन्न को लागी एक धेरै मन छुने कथा हो र यो यस सूची मा धेरै एनिम चलचित्रहरु जस्तै छैन। यो यस सूचीमा रहेका अन्य शृङ्खला वा चलचित्रहरूको लागि एकदमै फरक तरिकामा एनिमेटेड छ। 2016 मा रिलीज भएको, एनिमे कथा2घण्टा भन्दा लामो छ र अंग्रेजी डब साथै जापानी मूल अडियो, पोलिश, परम्परागत चाइनिज, सरलीकृत चिनियाँ, जापानी र अंग्रेजी उपशीर्षकहरू सहित छ।
२१. नोरागामी (१ सत्र, १२ एपिसोड)
नोरागामीले यातोको कथालाई पछ्याउँछन्, जो आहारविहीन भए तापनि उसले चाहेजस्तो प्रशंसा वा पूजा गर्दैन। यद्यपि, कथाले मोड लिन्छ जब उसले हियोरी इकी भनेर चिनिने केटीसँग भेट हुन्छ र टोली बनाउँछ। यस कारणले गर्दा, जोडीले उसलाई लामो समयदेखि चाहिने पहिचान ल्याउने प्रयास गर्छ। कथा हाईस्कूल DXD सँग अलि मिल्दोजुल्दो छ। त्यहाँ हाल कुनै अंग्रेजी डब उपलब्ध छैन, तथापि, त्यहाँ अंग्रेजी उपशीर्षकहरू उपलब्ध छन्।
२०. समुद्रमा लोली (१ सत्र, २ Ep एपिसोड)
समुद्रमा लोली हरायो
मानिस जमिन र समुद्रको बीचमा विभाजित भएको संसारमा, समुद्रका चार बाल्यकालका साथीहरूले सतहमा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ। शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा हामी दुई मुख्य पात्रहरू, हिकारी र अकारी र अन्य पात्रहरू बीचको सम्बन्ध देख्छौं। के तिनीहरू जमिनमा बस्ने अन्य बालबालिकाहरूसँग जोडिन र सामाजिकीकरण गर्न सक्षम हुनेछन्? वा तिनीहरू पहिले जस्तै फरक रूपमा देखिने छन्, ट्रेलर हेर्नुहोस् र आफैलाई हेर्नुहोस्? त्यहाँ हाल अंग्रेजी डब उपलब्ध छ, साथै जापानी मूल अडियो। त्यहाँ अंग्रेजी उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१।। मास्टर Takagi- सान teasing
Teasing Master Takagi- सान
सहपाठी ताकागी-सान द्वारा लगातार छेडिएको, मध्य-स्कुलर निशिकताले उनलाई उनको आफ्नै औषधिको एक खुराक दिएर प्रयास गर्ने (र असफल) द्वारा फिर्ता दिने कसम खानुभयो। यो युरोपियन स्पेनिश, फ्रान्सेली, जापानी, ब्राजिलियाली पोर्तुगाली र अंग्रेजी डब, साथै जापानी अडियो विवरणको साथ नेटफ्लिक्समा धेरै लोकप्रिय एनिमेस देखिन्छ। त्यहाँ अंग्रेजी, फ्रेन्च, पोलिस र जापानी उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१.. भ्याम्पायर नाइट (२ सत्र, प्रत्येक १ 18 एपिसोड)
कुख्यात क्रस एकेडेमीमा, दुई विद्यार्थी अनुशासन समितिका सदस्यहरूलाई मानव वर्ग र भ्याम्पायरहरूको रातको कक्षाको बीचमा शान्ति कायम राख्ने जिम्मा दिइएको छ। पछिल्लोमा अधिक बुद्धिमान र सुन्दर विद्यार्थीहरू छन्। शृङ्खलासँगै मुख्य पात्रहरू युकी र शून्यका लागि विभिन्न किसिमका चुनौती र नयाँ पात्रहरू देखापर्छन्। Netflix मा हेर्नको लागि हाल2सिजनहरू छन्, दुबै 13 एपिसोडहरू छन्। साथै यो प्रत्येक सिजनमा मूल जापानी अडियो, साथै फ्रान्सेली, अंग्रेजी, र इटालियन डब विज्ञापन पनि छ।
१.. शब्दहरूको बगैचा (चलचित्र, m 17 मी)
शब्दहरु को बगैचा
गार्डेन अफ वर्ड्स यस सूचीमा रहेका अन्य रोमान्सहरू जस्तै होइन र यो यसको उपस्थितिबाट स्पष्ट हुन्छ। यसले एक युवा विद्यार्थीलाई पछ्याउँछ, ताकाओले हरेक बिहान सुन्दर बगैंचामा समय बिताउन आफ्नो बिहानको कक्षाहरू छोड्ने निर्णय गर्छ। एक दिन उसले युकिनो नामकी एउटी वृद्ध महिलालाई भेट्छ जसले उहाँमा केही चासो राख्छ। दुबैले आफ्ना कथाहरू साझा गर्न थाल्छन् र सिक्न थाल्छन् कि बगैंचामा भेट्नु अघि अर्कोलाई कहिल्यै नचिनेको भए तापनि तिनीहरूमा धेरै समानता छ। यो चलचित्र Netflix मा हेर्नको लागि उपलब्ध छ र यो 45 मिनेट मात्र लामो छ, जसले यसलाई यस सूचीमा सबैभन्दा छोटो चलचित्र बनाउँछ। त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी र इटालियन डब साथै जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ अंग्रेजी र इटालियन उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१.. मासिक केटीहरू - Nozakai- कुन (१ सत्र, १२ भाग)
मासिक केटीहरू - Nozakai- कुन
सकुरा र नोजुकाईले मिकोशिबाको साथी काशिमा, एक लोकप्रिय केटीलाई भेटे। यस बीच, सकुराले मa्गाको पृष्ठभूमि कलाकारको पहिचान पत्ता लगाउन कोशिस गर्‍यो, जसलाई उनी धेरै चासो राख्छिन्। टोर्राडोरा र क्लन्नाड जस्ता यस श्रृंखलामा जानको लागि केही समय लाग्दछ, तर यसले खेललाई बढी खुशी पार्दछ। लोकप्रिय मa्गा उत्पादन भइरहेको छ, सकुराले पृष्ठभूमि कलाकार को हो भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्छिन् किनकी उनी यसबाट मोहित भएको देखिन्छ र यस व्यक्तिले जसले यो बनायो। यहाँ हाल १ भाग छ १२ एपिसोडको साथ। त्यहाँ एक स्पेनिश डब, ब्राजिलियाली पोर्तुगाली डब एक अंग्रेजी डब र पक्कै जापानी मूल अडियो पनि छ। त्यहाँ ब्राजिल पुर्तगाली, स्पेनिश र अंग्रेजी उपशीर्षक पनि छन्।
१.. तारांकन युद्ध (१ सत्र, २ Ep एपिसोड)
२१ औं शताब्दीमा पृथ्वी तीव्र गतिमा खस्कँदै गइरहेको आर्थिक स्थितिमा छ किनकि मेगा कर्पोरेसनहरू एकीकृत इन्टरप्राइज फाउन्डेशनको रूपमा चिनिन्छ, इन्भर्टिया पछि I सत्तामाnverutia) घटनाले ग्रहका अधिकांश सहरहरू नष्ट गर्यो। इन्भर्टियाले पनि केही मानिसहरूलाई महाशक्ति प्राप्त गर्ने परिणाम दियो, जसले जेनेस्टेला भनिने मानिसको नयाँ प्रजाति सिर्जना गर्यो। रिक्का सहर, जसलाई एस्टेरिस्क पनि भनिन्छ, छ वटा एकेडेमीहरू छन् जहाँ किशोरी जेनेस्टेलाले फेस्टास विशेष गरी फीनिक्स फेस्टा, ग्रिप्स फेस्टा र लिन्डवर्म फेस्टा नामक प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्छिन् - त्यसो गर्न लक्स नामक हतियारहरू चलाउँछन्। त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी डब साथै मूल जापानी मूल अडियो छ, त्यहाँ अंग्रेजी, फ्रान्सेली, पोलिश र पोर्तुगाली उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१.. मुटुको एक कानाफूसी (१ एच m१ मी)
मुटुको एक कानाफूसी
उही शीर्षकको मङ्गामा आधारित, यो एनिमेटेड फिल्म शिजुकु, एक जिज्ञासु जवान केटी र एक भोको पाठकलाई पछ्याउँछ, जो ठूलो भएपछि लेखक बन्न चाहन्छ। एक दिन उनले आफ्नो पुस्तकालयका सबै पुस्तकहरू पहिले सेइजी अमासावाले निकालेको देख्छिन्। ठूलो बिरालोको पछि लाग्ने बीचमा, एक विलक्षण एन्टिक डीलरसँग मित्रता गर्दै र उनको पहिलो उपन्यास लेख्दै, शिजुकुले यो रहस्यमय केटालाई खोज्ने लक्ष्य राख्छ जुन उनको आत्माको साथी हुन सक्छ। हामीले अंग्रेजी डबका साथै अङ्ग्रेजी उपशीर्षक र जापानी [CC] उपशीर्षकहरूको बारेमा अहिले थाहा पाएको छ।
१.. एनोहाना (१ सत्र, ११ एपिसोड)
अनुहनाले एक प्रेतवाधित किशोरको कथालाई पछ्याउँछ जुन पुरानो साथीको आत्माबाट सताइरहन्छ। यो समस्या समाधान गर्न, मुख्य पात्र, मेइको होन्माले बाल्यकालको क्लबका अन्य सदस्यहरूलाई केटीको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न मद्दत गर्न बोलाउँछन्। मूल रूपमा 2011 मा रिलिज भएको, कथा एक मीठो छ र कथाको रोमान्स पक्ष धेरै बिस्तारै अगाडि बढ्छ जब श्रृंखला जान्छ। त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी र जर्मन डब साथै जापानी मूल अडियो छ, त्यहाँ अंग्रेजी, फ्रान्सेली, पोलिश, अरबी, र पोर्तुगाली उपशीर्षकहरू पनि छन्।
१२. एक ह्विस्कर टाढा (चलचित्र १ घण्टा m 12 मिटर)
ए व्हिस्कर अवे एक केटीको कथालाई पछ्याउँछ जुन कुनै न कुनै रूपमा बिरालोमा परिणत हुन्छ। यो बाहिर जान्छ कि यो उनको प्रेम रुचि ध्यान आकर्षित गर्न को लागी हो, किनकि उसले बिरालाहरूलाई माया गर्छ। तर, उसले यो बुझ्नु अघि, मानव र जनावर बीचको रेखा धमिलो हुन थाल्छ। चलचित्र PG-रेट गरिएको छ र लगभग 1 घण्टा र 45 इन्च लामो छ। त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी डब, एक युरोपेली स्पेनिश डब, एक फ्रेन्च डब, र ब्राजिलियन पोर्चुगिज डब, साथै जापानी मूल अडियो र जापानी अडियो विवरण संस्करण पनि छ।
११. Highschool DXD (१ सत्र उपलब्ध, १२ एपिसोड)
डेडको हाईस्कूल, एपिसोड १ सत्र १]
हाईस्कूल डीएक्सडीले जवान विद्यार्थी इसेई हाउडउलाई पछ्यायो, जो एक युवा विकृत स्कूलको छन र एक दिन एक आकर्षक बुढी महिलाले मितिमा आमन्त्रित गर्छ जसलाई तुरुन्त प्रेम हुन्छ। त्यहाँ मिति समाप्त भएपछि यसको पछि यो कुरा प्रकट भयो कि महिला उनीसँग बाहिर जान चाहन्नुको एकमात्र कारण ऊ आफ्नो गुटमा रहेको जोखिमको कारण थियो। अर्को दिन ऊ आफ्नो ओछ्यानमा अर्को आइमाईलाई उठ्छ, कथा अगाडि बढ्छ। Highschool DXD पक्कै पनि राम्रो लगानी गर्नका लागि राम्रो रोमान्स एनिमेस हो किनभने त्यहाँ उच्च सम्भावना रहेको छ कि अझै watतुहरू अझै देख्न योग्यकोमा थपिन्छ। त्यहाँ 12 एपिसोडहरू छन् कि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाईस्कूल DXD को मूल श्रृंखलामा se सत्रहरू थिए, सबै एक अंग्रेजी डबको साथ। एक चोटि सम्मिलित भिडियो घुसाउनुहोस्, तपाईंलाई यो जस्तो लाग्न सक्छ यदि तपाईंले यो श्रृंखला देख्नु भएको छैन भने।
१०. तपाईंको अप्रिलमा झुटो (१ सत्र, १० एपिसोड)
अप्रिलमा तपाईंको जीवन
अप्रिलमा तपाईंको झूट एउटा केटाको बारेमा हो, जसले आमाको मृत्युपछि भायोलिन बजाउने केटीलाई भेट्छ। उनले आमाको मृत्यु पछि पियानो बजाउने इच्छा गुमाए। तर जब उसले भायोलिन बजाउने केटीलाई भेट्छ। तिनीहरू रोमान्टिक रूपमा संलग्न हुन्छन् र यसैको परिणाम स्वरूप तिनीहरूले सम्बन्ध सुरु गर्छन्। यो एक धेरै मीठो प्रकारको एनिमे हो र यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ भने यसले पक्कै पनि तपाईंलाई खुशी पार्नेछ। यसलाई जानुहोस् र सम्मिलित हेर्नुहोस्। त्यहाँ हाल अंग्रेजी डब, जर्मन र जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ पोलिश, अंग्रेजी, फ्रान्सेली र पोर्तुगाली उपशीर्षकहरू पनि छन्।
Your। तपाईंको नाम (चलचित्र, १ घण्टा m9मिटर)
तपाईंको नामले दुई विद्यार्थीहरूको धारणालाई नजिकबाट पछ्याउँछ। एक जना पुरुष र एक महिला जो एक दिन ब्युझिन्छन् र आफूले शरीर परिवर्तन गरेको महसुस गर्छन्। यो अर्को हप्ताहरूमा जारी रहन्छ र तिनीहरूले एकअर्काको जीवनको बारेमा थप जान्न थाल्छन् किनकि यो भइरहन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले केटी मित्सुहा मियामिजुलाई केटाको (टाकी ताचिबाना) जीवनमा बढी चासो राखेको देख्छौं, किनकि उनले ग्रामीण इलाकाको केटी भएर आफूले चाहेको सपनाको रोमाञ्चक शहरी जीवन बिताएको खुलासा भएको छ। के तिनीहरूका मार्गहरू वास्तविक संसारमा कहिल्यै पार हुनेछन्? त्यहाँ हाल फ्रेन्च र अंग्रेजी डब उपलब्ध छ साथै जापानी मूल। त्यहाँ अंग्रेजी र फ्रान्सेली उपशीर्षकहरू पनि छन्।
Ange. एन्जिल बीट्स (१ सत्र, १ Ep एपिसोड)
एंजेल बीट्सले एउटा विद्यालयको वरिपरि केन्द्रहरू पछ्याउँछ "जो पछिको जीवनको लागि एउटा बाटो हो" एक किशोरी यस शुद्धिकरण संसारमा भएकाहरूको अधिकारको लागि लडाइँमा फसेपछि। त्यहाँ हाल जर्मन र अंग्रेजी डब उपलब्ध छ साथै जापानी मूल अडियो र अंग्रेजी, अरबी, पोलिश, फ्रान्सेली र पोर्तुगाली उपशीर्षकहरू।
Love. प्रेम, चुनिब्यो र अन्य भ्रम (१ सत्र, १ Ep एपिसोड)
Chunibyo र अन्य भ्रमहरु लाई माया गर्नुहोस्
प्रेम, चुनिब्यो र अन्य भ्रमको कथा र स्वर एक धेरै अनौठो तर सीधा छ। यसले विद्यार्थीहरूको समूहलाई पछ्याउँछ जसले न्यापिङ क्लब भनेर चिनिने क्लब बनाउँछ। दुई मुख्य पात्रहरू, युता र रिक्का दुवै आफ्नो रुचिहरू समान छन् भनेर बुझेर जोडिन्छन्। सामान्यतया, चुनिब्यो अपरिपक्वताको अवस्था हो जुन रिक्का जस्ता केही बच्चाहरूले छोड्न सक्दैनन्। रिक्का अझै पनि बच्चाको जस्तै व्यवहार गर्छिन्, आफ्ना सबै सहपाठीहरूलाई आफ्ना कल्पनाहरू र काल्पनिक व्यवहारहरू व्यक्त गर्दछ। युता, मुख्य पात्र रिक्काप्रति सहानुभूतिपूर्ण छ किनकि उसले यसरी काम गरेको खुलासा भएको छ, किनकि उनीसँग पनि चुनिब्यो थियो जबसम्म उनी बाहिर नआएसम्म। यी दुई बीचको सम्बन्ध अगाडि बढ्छ र परिणामको रूपमा तिनीहरूको सम्बन्ध सुरु हुन्छ। हामी यो सिफारिस गर्नेछौं किनभने। यसको उपलब्धता र तथ्य यो हो कि त्यहाँ दोस्रो सिजन छ जुन सबै रिक्काको दृष्टिकोणबाट हो। यसका साथै युता र रिक्काको प्रेमकथालाई टुङ्गोमा पुर्याउने चलचित्र पनि छ । त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी डब साथै जापानी मूल अडियो साथै जापानी र अंग्रेजी उपशीर्षकहरू छन्।
Gran. GranBlue काल्पनिक, एनिमेशन (१ सत्र, १ Ep एपिसोड)
टापुहरू आकाशबाट तैरने संसारमा, ग्रानले एर्स्टे साम्राज्यले प्राथमिक जनावरहरूलाई बोलाउने क्षमताको लागि खोजेको एक रहस्यमय केटीसँग भेट्छ। ग्रानब्लुसँग एकदमै साहसिक-प्रकारको अनुभूति छ र यो शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा र पात्रहरू जाँदा स्पष्ट भयो। विभिन्न खोजहरूमा। हाल, त्यहाँ अंग्रेजी डब र जापानी मूलका साथै जापानी, ब्राजिलियन पोर्चुगिज, स्पेनिश र अंग्रेजी उपशीर्षकहरू छन्।
Love. प्रेम Chunibyo र अन्य भ्रम - रिक्का संस्करण (चलचित्र 5h 1m)
यो चलचित्र मौलिक शृङ्खलामा उस्तै छ तर वास्तविकतामा फरक छ कि यसले रिक्काको परिप्रेक्ष्यलाई धेरै नजिकबाट पछ्याउँछ। यसले रिक्काको परिप्रेक्ष्यलाई पछ्याउँछ किनकि उनी प्रेम, मित्रता र कल्पनाको वास्तविकतासँग व्यवहार गर्छिन्। त्यहाँ मूल श्रृंखला विज्ञापन भन्दा धेरै फरक छैन त्यहाँ केहि अतिरिक्त दृश्यहरू छन् जुन धेरै रोचक र हास्यास्पद छन्। जब हामी रिक्काको परिप्रेक्ष्य मार्फत भन्छौं हाम्रो मतलब उनको जादुई काल्पनिक प्रकारको दृष्टि परिप्रेक्ष्य मार्फत हुन्छ। यदि तपाईंले पहिले नै मौलिक शृङ्खला हेरिसक्नुभएको छ भने हामी तपाईंलाई यो जान दिन आग्रह गर्छौं। हाल, जापानी मूल पाठ्यक्रमको लागि अंग्रेजी डब उपलब्ध छ। त्यहाँ अंग्रेजी उपशीर्षकहरू पनि छन्।
Love. प्रेम, चुनिब्यो र अन्य भ्रम: मलाई लिनुहोस् (चलचित्र १ घण्टा m4मिटर)
प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा, रिक्काकी बहिनी उनलाई विदेश जान चाहन्छिन्। युटा जापान हुँदै सडक यात्राको साथ आफ्नो प्रेम वास्तविक हो भनेर प्रमाणित गर्न निस्कन्छिन्। के रिक्का र युआले प्रेम पाउँछन् र एकअर्कालाई प्रमाणित गर्न थाल्छन् कि उनीहरू दुबै चाहन्छन्? मौलिक शृङ्खला र पहिलो चलचित्रको निरन्तरताका साथ, यदि तपाईंले अघिल्लो चलचित्र र रिक्का र युटा, लभ चुनिब्यो, र अन्य भ्रमहरू समावेश गर्ने एनिमेटेड शृङ्खलाहरू हेर्नुभएको छ भने मात्र हामी यो चलचित्रलाई सुझाव दिन्छौं। हाल, त्यहाँ अंग्रेजी डब र जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ अंग्रेजी उपशीर्षकहरू पनि छन्।
Nin. निनोकुनी (चलचित्र १ एच m3मिटर)
एक भिडियो पूर्वावलोकन चाँडै उपलब्ध हुनेछ।
दुई औसत किशोरकिशोरीहरू अर्को संसारबाट आफ्नो साथी र उनको समकक्षको जीवन बचाउन जादुई खोजहरूमा जान्छन्। यद्यपि तिनीहरूको मिशनमा हुँदा तिनीहरूले सामना गर्ने समस्याहरू प्रेमले विस्तारित हुन्छन् जसले उनीहरूको यात्रालाई जटिल बनाउँछ। त्यहाँ हाल युरोपेली स्पेनिश, फ्रेन्च, ब्राजिलियन पोर्चुगिज, अंग्रेजी, र जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ अंग्रेजी, फ्रान्सेली, पोलिश र जापानी उपशीर्षकहरू पनि छन्।
२. टोराडोरा! (१ सत्र, २ Ep एपिसोड)
टोराडोरा एनिमे रोमान्स विधाको धेरै लोकप्रिय छनोट भएको छ धेरै मानिसहरूले यस श्रृंखलालाई उनीहरूको सुरुवात बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरेर। यसको एउटा कारण छ। टोराडोरासँग मेरो विचारमा राम्रो कथा छ, नयाँ पात्रहरू र अन्य उप-कथाहरू कथा अगाडि बढ्दै जाँदा थपिएको छ। कथाले मुख्यतया विद्यालयका विद्यार्थीहरूको समूहलाई पछ्याउँछ र टाइगा र रियुजीसँग नजिक छ जसले आफ्नो अन्य व्यक्तिगत प्रेम रुचिहरूमा एकअर्कालाई मद्दत गर्न सहमत भएर आफ्नो सम्बन्ध सुरु गर्छ। के तिनीहरू एकअर्कालाई माया गर्न थाल्छन्? त्यहाँ हाल अंग्रेजी, स्पेनिश र ब्राजिलियन पोर्चुगिजका साथै अंग्रेजी डब उपलब्ध छ।
१. एउटा मौन आवाज (चलचित्र, २ घण्टा m मिटर)
एउटा मौन आवाज
धेरै कारणहरूले गर्दा हाम्रो सूचीमा एक मौन आवाज शीर्ष छनौट हो। सबै भन्दा पहिले चलचित्र अचम्मको देखियो, हरेक अन्तिम विवरण सम्म। हरेक क्यारेक्टर यति विस्तार र मिहिनेतका साथ कोरिएको थियो, तपाईले यो चलचित्र निर्माणमा धेरै मेहनत गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। आवाज अभिनय धेरै राम्रो थियो र म यसमा कुनै समस्याको बारेमा सोच्न सक्दिन। यो एकदम कार्टुन जस्तो चलचित्र हो तर यसमा यसको भावनात्मक क्षणहरू पनि छन् र यसले यसको रोमान्टिक तत्वलाई पनि लागू गर्न मद्दत गर्दछ। कथा निम्नानुसार जान्छ:
ए साइलेन्ट भ्वाइस एउटी बहिरा केटी र उनको पूर्व बदमासी को बारे मा धेरै मन छुने कथा हो। केवल बहिरा र फरक भएको कारणले स्कूलमा दुर्व्यवहार गरिसकेपछि, मुख्य पात्र, शौउउ, उनको पूर्व बदमाश, शोयासँग आमने सामने आउँछ। केहि मेलमिलाप पछि शोयाले यसलाई Shoukou मा पुग्ने निर्णय गर्छ र उनीसँग पुग्छ। उसले उनीसँग गरेको व्यवहारको वरिपरि पछुतो महसुस गर्छ, यसको कारणले उसले छुटकाराको अयोग्य महसुस गर्छ तर अझै चीजहरू ठीक गर्न चाहन्छ। के शोयालाई आफ्नो कार्यको लागि माफी दिइनेछ? र के उसले उसलाई यो बनाउन सक्षम हुनेछ? यो धेरै मीठो छ र चलचित्र २ घन्टा भन्दा धेरै लामो छ भनेर हामी तपाईंलाई यो जाने सिफारिस गर्छौं। यदि तपाइँ यस चलचित्रमा केहि थप चाहनुहुन्छ भने तपाइँ हाम्रो लेख एक मौन आवाजमा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यहाँ हाल एक अंग्रेजी डब, एक स्पेनिश डब, र जापानी मूल अडियो छ। त्यहाँ अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रान्सेली र ब्राजिलियन उपशीर्षकहरू पनि छन्।
यदि तपाईंले यो सूचीको आनन्द लिनुभयो र यी मध्ये कुनै पनि शृङ्खला वा चलचित्रहरू हेर्नुभएको छ भने, हामी तपाईंलाई तल टिप्पणी गर्न आग्रह गर्नेछौं जुन तपाईंलाई मनपर्ने थियो। हामी भविष्यमा यस जस्तै थप सूचीहरू बनाउन जाँदैछौं त्यसैले वरिपरि रहनुहोस्। लाईक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं सबैको दिन राम्रो बितोस।
तपाईले हाम्रो भर्खरको पोष्ट यहाँ हेर्नुहोस् - https://cradleview.net/most-recent-posts
तपाईं हाम्रो शीर्ष १० श्रृंखला यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ - https://cradleview.net/top-5/
तपाईं हाम्रो समीक्षा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ - https://cradleview.net/reviews/
हाम्रो लेख पृष्ठमा लिंक गर्नुहोस् जहाँ हाम्रो सबै लेखहरू पोष्ट गरिएको छ - https://cradleview.net/all-posts/
तपाईं हाम्रो समुदाय पृष्ठमा प्रयोग गर्न पुग्न सक्नुहुनेछ - https://cradleview.net/all-posts/
तपाईले हाम्रो साइटलाई यहाँ दान गर्न सक्नुहुन्छ - https://cradleview.net/donations/
तपाईं यहाँ एक सम्पर्क फारम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ - https://cradleview.net/info/
हाम्रो सार्वजनिक स्टोर - https://cradleview.net/store/
टैग: एनिमे animeanimeblog animeblog animeromance animeromanceblog एनिमेरोमेन्सरीहरू एनिमेरोमान्ट घडी एनिमेरोमान्स हेर्नको लागि animetowatchonnetflix asielentvoiceromanticanime मौन आवाज asilentvoiceanime asilentvoiceromanceanime bestromanceanimetowatch ब्लग मौन आवाज हेर्न लायक छ चलचित्रवाटोननेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्सनैम नेटफ्लिक्सनिमेरोमेन्स नेटफ्लिक्सनिमेटोवाच नेटफ्लिक्सरोमेन्स रोमान्सनिमेमोवीज रोमान्सनिमेमोविस्टोवाचोननेटफ्लिक्स रोमान्सनिमेरीभ्यू रोमान्सनिमेसेरीज रोमान्सनिमेटीवाच रोमान्सनिमेमटोवाचनेटफ्लिक्स रोमान्सनिमेमटोवाचोननेटफ्लिक्स रोमान्टेनमे रोमान्टिमेनिटोवाचोननेटफ्लिक्स shaliwatchasalentvoice top25romanceanimetowatchonnetflix topromananceanimetowatch अनलाइन टोराडोराएनिमेरोमान्स
अघिल्लो प्रविष्टि भाँडा- A- प्रेमिका वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ?
अर्को प्रविष्टि एक मौन आवाज लायक हेरिरहेको छ?